अमेरिकी एसपिपी प्रस्तावको चौतर्फी विरोध | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home स्वतन्त्र विचार अमेरिकी एसपिपी प्रस्तावको चौतर्फी विरोध
अमेरिकी एसपिपी प्रस्तावको चौतर्फी विरोध
– सुदर्शनराज पाण्डे
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी संसद्बाट पारित गराएपछि अब अर्को राष्ट्रघाती प्रस्ताव एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न तम्सिएका छन्। एमसिसी सम्झौताको चौतर्फी र देशव्यापी चर्को विरोध हुँदाहुँदै सत्ता पक्ष काङ्ग्रेस, एमालेले बहुमतबाट पारित गरेका थिए। अहिले पनि बहुमतबाटै एसपिपी प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
अमेरिकी सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई नवउपनिवेश बनाएर युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणझैं नेपालमा पनि त्यस्तै आक्रमण कहींकतैबाट गराएर नेपाल र नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ। नेपालको असल छिमेकी चीनलाई घेर्ने र चीनमाथि आक्रमण गर्ने साम्राज्यवादी अमेरिकी नीति अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी विकास अनुदान एमसिसी सम्झौता र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एसपिपी प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुन लागेको स्पष्ट छ। अमेरिका र चीनबीच यतिखेर चर्को अन्तर्विरोध र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अमेरिका यतिखेर सामाजिक समाजवादी मुलुक रूस र साम्यवादी मुलुक दुवैसँग आफ्नो वर्चस्व कायम गराउन खोजिरहेको छ। नेपाल र नेपालीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकाको शत्रु नेपालको मित्र हुन सक्दछ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बचेखुचेको सिद्धान्त नेपालले बचाउन सकेन भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता कुनै पनि हालतमा जोगाउन सकिंदैन। शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपाललाई कसैको उपनिवेश बन्न दिएन, राजतन्त्र ढलेपछि बहुदलीय संसदीय राजनीतिक दलका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भनाउँदा सबैले नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश बन्न दिने ढोका खोलिदिएका छन्। यतिखेर विश्वको राजनीति, कूटनीति निकै जोखिमपूर्ण छ। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई कठपुतली बनाएर नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोज्नेबित्तिकै नेपाली भूमिबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई टार्न सक्दैन। जसरी अमेरिका र भारत कतिपय कूटनीतिक मामिलामा एक भएझैं चीन समर्थक राष्ट्रहरू पनि निश्चितरूपमा गोलबन्द हुनेछन्। अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व र नेपाल भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिने गठबन्धन सरकारको नीतिले नेपालको अवस्था साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ मात्र होइन, विश्व इतिहासमा आजसम्म कुनै देशको उपनिवेश नभई सार्वभौम र स्वतन्त्र देश नेपालीहरू रहँदारहँदै जान्दा र बुझ्दाबुझ्दै उपनिवेश बन्न पुग्ने भयो। नेपाललाई उपनिवेश बनाउने तर्खरमा लागेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताविरुद्ध अविलम्ब देशव्यापी सशक्त देशभक्ति र वीरतापूर्ण लडाइँ लड्न नेपालीहरूलाई बुद्धि र शक्ति आयो भने गम्भीर खतरा र सङ्कटबाट देशलाई बचाउन पनि सकिन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवादको हेपाहा नीति र ज्यादतिविरुद्ध विश्वका सम्पूर्ण अमेरिका पीडित देश र जनता गोलबन्द हुन सक्ने उचित परिस्थिति बन्न पनि सक्दछ। विश्वमा अहिलेसम्म भएको अमेरिकी आक्रमणमा हरुवा गोरुको भगुवा दाउ भनेझैं पिठ्यूँ फर्काएर भागेको दृष्टान्त धेरै छन्। नेपाली भूमि उपयोग गरेर आफूसरहकै शक्तिशाली राष्ट्र चीनलाई जिस्काउने अमेरिकी नीति आगामी दिनमा श्याल हुइøयाँ सिवाय केही नहुन पनि सक्दछ। भारत र चीन दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको अति सामरिक महत्वको नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो प्रधान परराष्ट्र नीति बनायो भने नेपालको राष्ट्रियता अक्षुण्ण र अखण्ड रहन सक्दछ। सम्भावना नै सम्भावना रहेको नेपालको रक्षा गर्ने काम सर्वप्रथम राजनीतिका निर्णायक शक्ति र परिवर्तनका संवाहक शक्ति सार्वभौम देशभक्त नेपाली जनताले मात्र सक्दछ। आजसम्मको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा नेपाल अब्बल नै रहेको छ। अमेरिकी पक्षधरहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा छन्। अमेरिकको पक्ष्Fधर बनेर पारिवारिक भातभान्छा चलाउँदै आएका चिनेसम्मका नेताहरूलाई सशक्त जनदबाबले लखेट्न सकिन्छ। भनिन्छ, भुस्याहा कुकुरको सहारा कोही हुँदैन। केही महीना पहिले एकजना चिनियाँ कूटनीतिज्ञले नेपालका केही नेताहरूलाई अमेरिकी दलाल, अमेरिकी जासूस संस्था सिआइएका नोकर भनेका थिए। यतिखेर शेरबहादुर देउवालगायत व्यक्तिहरू वफादार नोकर बनेर अमेरिकी सरकारले अ–हाएको कार्य धमाधम फत्ते गर्दैछन्। निर्वाध, निसङ्कोच राष्ट्रघाती कार्य गर्न उद्यत छन्। उनीहरूले डर मानेका छैनन्, निर्लज्ज तरीकाले नेपालको युगौंयुगको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गरी नेपाल आमाको बलात्कार गर्दैछन्। बेला आउँछ पर्खदैंन, बगेको खोला फर्कदैन भनेझैं अमेरिकी गलत नीति र व्यवहारलाई नेपाली जनताहरूले तत्काल बहिष्कार र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ। हामी नेपालीले अमेरिकी गलत नीति र व्यवहारको विरोध नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? समय छउन्जेल पर्खेर बस्ने ? समय खेर गएपछि विरोध गरेर के हुन्छ ? अमेरिकाले विश्वभर अति र ज्यादति गरिरहेको छ। अति गर्ने अमेरिकाको खति हुने बेला आएको छ। अब चीन र अमेरिका द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्ध चर्काउँछ। तेस्रो विश्वयुद्धले अमेरिकालाई कठै भन्दैन। सर्वनाश, सत्यानाश नभई अमेरिकाको चेत खुल्दैन। शेरबहादुर देउवालगायतलाई आहुति गर्ने रहर लागेको छ। युद्ध नेपालको बाध्यता होइन। सर्वनाशी, सत्यनाशी अमेरिकाको रहर हो। इराक, अफगानिस्तानझैं अमेरिकाको हाल चीन–अमेरिका युद्धले देखाउने छ। चीन–अमेरिका युद्ध हुनु अघि भीषण प्राकृतिक प्रकोप र महामारी हुने सम्भावना छ। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार रहेसम्म अनिष्ट टर्न सक्दैन। अनिष्ट र अनर्थबाट देशलाई बचाउन देउवा सरकारलाई आर्यघाट पु–याउनै पर्छ।
एसपिपीबाट फर्कन राजनीतिक दलहरूले भन्दा ठूला र साना मिडिया, सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तिहरूले चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन्। राष्ट्रघाती दलहरू काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत मौन छन्। वैकल्पिक शक्ति राप्रपा (लिङ्देन), विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेकपा बहुमत, नेकपा एमालेका डा भीम रावललगायत इमानदारीका साथ देशभक्तिका पक्षमा एसपिपीको विरोधमा उत्रिएका छन्। एमसिसी र एसपिपीजस्ता अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका राजनीतिक शक्तिसँग मात्र जनशक्ति आबद्ध भएको छ। देशभक्त शक्ति जनताले एसपिपी राष्ट्रघाती दलाल पक्षलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट पन्छ्याउन सक्ने राजनीतिक आँधीबेहरी उठ्ने प्रबल सम्भावना छ। नेपाल देख्न र लेख्न नपाउने अवस्था अहिले आइरहेको छ। राष्ट्रघाती दलाल राजनीति शक्तिहरूविरुद्ध निर्मम र निर्णायक जनान्दोलन यतिखेर बाध्यता हो। होइन भने नेपाल अमेरिकी उपनिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वभूमि बन्न रोकेर रोकिंदैन। एसपिपी नेपाली सेनाले होइन, देशभक्त सबै राजनीतिक दलहरूले एक स्वरले रोक्न सक्नुपर्दछ, नत्र हामी सार्वभौम नेपाली नागरिक भएको ठहर्दैनौं। गौरवशाली नेपालको इतिहास कायम राख्न हामी नेपाली एक हुनुपर्ने अन्तिम घडी आएको छ। नेपालीहरूले वीरता प्रदर्शन गरे भने अमेरिकी प्रभाव र हस्तक्षेपलाई सदाका लागि समाप्त पार्न सक्दछौं। विदेशी हस्तक्षेप, अनुचित दबाब रोक्ने एउटै हतियार जनएकता हो। जनएकतामा अभूतपूर्व शक्ति हुन्छ। जनता जाग्यो भने अमेरिकी दलाललगायत सम्पूर्ण दलालहरू वीरताको मैदानमा मूला काटिएझैं सोत्तर हुनेछन्। यो नेपालीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। नेपाली देशभक्त सेना, प्रहरी, नेपाली जनता एकै युद्ध मैदानमा उत्रिएपछि हामी नेपालीको विजय सुनिश्चित छ।
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जनयुद्ध र जनान्दोलन हाँक्ने शक्तिहरू यतिखेर विदेशी दलाल र अराष्ट्रिय तत्व साबित भएका छन्। उनीहरूको नकारात्मक आन्दोलनको प्रतिफल यतिखेर राष्ट्रघाती साबित भएको छ। उनीहरूको भय र भ्रमबाट पन्छिएर देशभक्त नेपालीहरूले दलाल, राष्ट्रघातीहरूविरुद्ध डटेर ऐतिहासिक मुकाबिला गरेर नेपालीको वीरता र देशभक्तिको परिचय दिनुपर्दछ। समयभन्दा पहिले, भाग्यभन्दा बढी पाइँदैन भनिन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपालका राष्ट्रघाती दलका नेताहरूविरुद्ध लड्ने नेपालीका लागि अवसर र भाग्य दुवै हो। हामीले अब ब्युँझिएर सपना देख्नुपर्दछ। हामीहरूले सामुन्नेबाट हेर्दै आएको सपना पूरा गर्नुपर्छ। ओली र शेरबहादुर राष्ट्रघातका सवालमा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हामी नेपालीहरूले इमानदारीपूर्वक देशभक्तिपूर्ण देश बचाउ आन्दोलन हाँक्ने हो भने अभूतपूर्व र अपार शक्ति प्राप्त हुने सम्भावना छ। नेपालका कम्युनिस्ट भनाउँदा ठूलो सङ्ख्यामा गतिछाडा, मतिछाडा भइसकेका छन्। उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन। नेपालीहरू स्वस्फूर्त ढङ्गले अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध लड्न विलम्ब गरेनौं भने एसपिपीबाट फर्कन दबाब हुन्छ। नेपाल सुरक्षित रहन्छ।
Previous articleजीवनसाथीसँग गर्नुहोस् यी योग आसन, सम्बन्ध बलियो हुनेछ
Next articleहोचोको मुखमा घोचो
बकपत्रको गलत व्याख्याः न्यायिक निर्णयमा यसले पार्ने प्रभाव